Selidumela emansumpeni kowe-Essence Festival | Eyethu News
Selidumela emansumpeni kowe-Essence Festival
“Uthando, ukukhuthazeka, namandla.”
Amaciko aseThekwini azothola ithuba lokuzibonakalisa emcimbini we Essence Festival Durban lapha bathathwe eCity Hall, kugqugquzelwa ukuthengwa kwamathikithi ngeledlule. Isithombe: Sabelo Ngema
SEZIYAZWAKALA izigi zomcimbi omkhulukazi i-Essence Festival Durban nobhekwe ngabomvu ozoba seThekwini e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) ngoNovemba 8 kuya ku-13.
Abahleli bale-festival yaminyaka yonke eMelika (USA) eNew Orleans, bawulethe eThekwini kanti seliqalile ukuwukhangisa kuleli. Isiqubulo sayo sithi: ‘Uthando, Ukukhuthazeka naMandla’.
Uma uzifela ngomculo, ubumnandi, imfashini, impilo esezingeni eliphezulu, izibiliboco, izincwadi nokubuciko, ungaphuthelwa.
Lizovula ngengqungquthela ebizwa ngeDurban Business Fair: Business Conference ezoqala ngo-08h00 ekuseni iphele ngo-15h03 ntambama. Kungenwa mahhala kuzo izinsuku ezimbili.
Ngo Novemba 09 umcimbi wokuthola ithuba lokwazana kangcono (Durban Business Fair Trade Night Networking Cocktail) kusukela 18h00.
Izihlabani emkhakheni eyahlukene ezizokhulum zizonandisa kubalwa uSteve Harvey, uZanele Mbokazi, uKelly Price, uGcina Mhlophe, uBasetsana Kumalo, uMzwanele Manyi, uChef Sherwyn Weaich nabanye.
NgoNovemba 10 isithangami sabezindaba ngo 12h00-15h30 ne-Articulate Africa Opening Night kusukela ngo 18h00-21h00 ebusuku.
Ngo Novemba 11 kuzoba nesidlo sasekuseni samaqhawe esibizwa nge Legacy Breakfast ngo 07:30-11:h00.
Awuzukuphelela e-ICC kodwa ngoNovemba 12 kube yidili lomculo obizwa nge-Essence All Stars Music Concert ngo 18:00-23:00. kuzoboshelwa abaculi abafana no Ne-yo, uBabes Wodumo, uBlack Coffee, uDj Zinhle, uCassper nabanye.
Uzovala ngegiya eliphezulu ngendumezulu yekhonsathi yomculo wokholo enkundleni yezemidlalo iMoses Mbabhida obizwa nge Essence All Star Gospel Concert ngoNovemba 13 kusukela ngo 18h00-23h00.
Abaculi abazonandisa kulekhonsathi kubalwa i-Joyous Celebration, uMary Mary, uThina Zungu nabanye khona lapho kuzophinde kuhlonishwe abaculi abadume umhlaba wonke okubalwa uYolanda Adams ozophinde anandise uzohlonishwa noDkt Joseph Shabalala ongumholi we Ladysmith Black Mambazo.
Amanye amaciko azonandisa kubalwa iBig Nuz, uBabe Wodumo, u-AKA,uNtokozo Mbambo, uDj Tira, uWizkid, uCasper Nyovest, uDj Zinhle, uSomizi Mhlongo, uSfiso Ncwane, uZoe The Seed, uRiky Rick, Toya Delezy nabanye.
Ngeminye imininingwane vakashela kwi: essencefestiveldurban.com
Zingenisa njengomfula izinkinga zemali konoxhaxha lwezimoto